Qofna ha ku qasbin in uu ku xasuusnaado mar walba, xusuusta qofka waa in ay u timaadaa si dabiicyan ah.
Ha u ooyin hana u murugoon in qof hebel uusan dan kaa lahayn ama uusan ku baraarugsanayn jiritaankaaga.
Qofna ha ka codsan in uu si wanaagsan ama ku farxad galisa kuula dhaqmo, dhaqanka wanaagsan ee qofka kaaga imaanaya wuxuu ku wanaagsan yahay in uu ku yimaado dareen iyo ogolaanshiyo qofkaas xagiisa ah, maya codsi xagaaga ka yimid.
Aamusnaantaada waa in ay badataa mar walba, u ogolow in ay dareemaan sida aysan noloshooda kaamil u ahayn adiga la’aantaa.
Haddii ay kuu xiisa qabaan ayaga ayaaba fadhi karayn, Aadanaha dhaqankiisa ayaa ah in uusan ka caajisin meesha uu is leeyahay dantaada waa ku jirtaa raadinteeda.
2-Ragow rabi ha idin dhaafo.
3-Ha u ogolaan.
Qof isaga nabad ku jiifa yuusan sabab u noqon in aad seexan weyso.
Nolosha waa mid dhib badan balse, qof isaga nabad ku nool in uu adiga in aad noolaan wayso sabab u noqdo ha u ogolaan.
4-Waan fahmi karaa.
Wuxuu yiri “farriin kaama helo? Waan fahmi karaa.
Ima soo wacdid waan fahmi karaa.
Waqti iima haysid, taasna waan fahmi karaa.
Laakin marka qof isoo wac, farriin ii soo diro, waqtina ii hayo aad aragto, waxaan rajaynayaa in aad adigana fahmi doonto”.
Waa hubaal in aad aamusnaanta ku awood badantahay kuna nabad badantahay, sidoo kale ku sharaf badantahay kuna qurux badantahay kuna maamus badantahay
Bani aadamku waa sida mashiin fasiraad badan, sharraxaad badana u baahan ama jecel in uu wax sharraxo mar walba.
Waxay jecel yihiin in ay ogaadaan waxa aad ka fakarayso.
Taas haddaad si dhab ah naftaada u xakamayso uma suuroobayso in ay faalo iyo sharraxaad toona kaa baxshaan.
Hadalkaaga yaraantiisa waa kor u kicidda haybaddaada.
Hadalkaaga yaraantiisa waa qeexidda quruxda iyo waxtarka hadafkaaga.
Hadalkaaga yaraantiisa waa hufnaantaa iyo asturnaanta shaqsiyaddaada
Soomaali waxay tiri ” hadal badan haan ma buuxsho”
Hadalkaaga yaree hadafkaagana hadal yar kusoo koob, farriintaada carab gaaban wax ku gaarsii.
Wixii lagaa qarsday ama kaa qorsoon qod qodiddooda ma wanaagsana adaabta wanaagsana sal kuma lahan.
Waxba ha waydiin qof waxa aad is leedahay wuu qarsanaya.
Wixii aan kuu muuqan sidoodaba waa wax aan laguugu tala galin ogaantooda sida badana kuma quseeyaan.
9-Yaree fakarka badan.
Xanuunka fakarka daawo ma lahan ayey dhaheen, maxaa yeelay, xitaa marka aad hurudid waxaad ku riyoonaysaa waxa fakar ahaan kugu taagan.
Sidaa darteed, yaree fakarka badan si naftaada ay caafimaad u hesho.
10- Is baddalka qofka.
Waxay dhaheen sababta keenta in qofku is baddala waa laba sababood.
1 marka uu yeesho tacliin ka badan inta ay naftiisa u baahnayd.
2 iyo marka uu helo wax naftiisa mudnayd wax ka badan, micnaha inta uu u qalmay in ka badan.
Waxay dhaheen luuqadda ruuxaanta ma qaldanto ayaga oo taa noo sii sharexayana waxay sheegeen in dareenka sidiisaba qofka aad u haysid uu kuu hayo.
Qofka aad dareentid ayaa ku dareema waa hadal ruuxaaneedka!!
Haye mala qabtaa?
Wax walba in qalbiga laga sameeyo ayaa wanaagsan quruxda afcaasheenana waa mid taa ku jirta.
Ma ahan in qof aad ku qasabtaa in uu kuu sameeyo wax naftaada ay jeceshayay balse tiisa aysan rabin.
Quruxda waxa la isku sameeyo ama la isi siiyo ayaa ah waxa qalbigu garto, garasha qalbi haddii aysan jirin ma jirayso wax laguu sameeyay oo qasab aad ku dalbatay oo dhadhan yeesha.
13-Sharaf u dhimasho.
Sharaf u dhimasho qiima ma lahan marka aad liidato.
In aad is dhiibto ayaa dhaanta si aad jaanis kale oo kusoo kabsato aad u hesho inta aad god gali lahayd.
14-Yaa kuu qalma?
Qofkii qalbigaada wax wanaagsan ku dhex samaystaa ayaa ah qofka kuu qalma.
Qore: Mohamed Musa Sh. Nooor